अनौठो संसार | mulkhabar.com
काठमाडौं, ७ वैशाख । विवाहमा लाखाैं नगद र गरगहना दाईजाे दिएकाे र नदिए विवाह समेत राेकीएका समाचार त पढेकाे वा सुनेकाे नै हाे तर यहाँ यस्तो अनाैठाे समाचार पस्कँदैछाैं । छोरीको विवाह गरेर दाइजोको रुपमा सर्प दिइन्छ भन्दा अचम्म लाग्छ तर यो सत्य हो । भारतको मध्यप्रदेश बसिआएका सपेरिया (सर्प नचाउने) समुदायमा दाइजोको रुपमा २१ […]
वैशाख, काठमाडौं । धेरै युवाहरु शरिरको मोटोपना बढ्दा चिन्तित हुन्छन् । उनीहरुलाई यो खबरले खुशी तुल्याउनेछ । नेपालमा पहिलोपटक मोटेहरुको सौन्दर्य प्रतियोगिता आयोजना हुँदैछ । मोडल सङ्स नेपालले ग्लोरी मिडियासँगको सहकार्यमा ‘मिस्टर प्लस साइज नेपाल’ आयोजना गर्न लागेको हो । प्रतियोगितामा १६ देखि ५५ बर्ष उमेर समूहका विवाहित तथा अविवाहित पुरुषहरुले भाग लिन सक्नेछन् । […]
काठमाडौं , २० फागुन – पछिल्ला दिनहरुमा समाजमा महिला पिडित भएका खबरहरु आउँछन् । पतिबाट पिडित भएका महिलाको लागि विभिन्न आश्रय दिएर राखेको खबर त हामीले धेरै मात्रामा पाएका छौं । तर, भारतमा भने पत्नी पिडित पुरुषहरुको लागि समेत आश्रय स्थापना भएको छ । महाराष्ट्रको औरंगाबाट १२ किलोमिटर टाढा शिरडी मुम्बाइ हाइवे छेउमा यो आश्रम […]
Posted in अनौठो संसार,समाज Read More »
एजेन्सी, फागुन – तपाईंले एउटा जाेडीकाे एकपटक भन्दा बढी चाेटी बिहे भएकाे देख्नुभएकाे छ ? कि सुन्नुभएकाे छ ? यदि छैन भने पढ्नुहाेस अब । एकपटक बिहे गर्दा त झमेला हुन्छ भने क्यालिफोर्नियाको जोडी केन्जी र टेलर तानिगुचीले १२ पटक बिहे गर्न भ्याएका छन् । त्यो पनि १२ देशमा महिनैपिच्छे । यो जोडीले साथीभाइ र […]
Posted in अनौठो संसार Read More »
पछिल्लो समय बिरामी पर्नासाथ उपचार गर्ने चेतना बढिरहेको छ। तर गोरखामा एउटा यस्तो गाउँ छ, जहाँ बिरामी भए नुनको पोको ढोकामा झुन्ड्याएर देउता पुकारिन्छ। हिमाली भेगको चुमनुब्री गाउँपालिका-३ सिर्दीबासमा कोही बिरामी परे नुनको पोको ढोकामा झुन्ड्याउने पुरानो प्रचलन अझै यथावत् छ। धामीले जोखाना हेरेपछि देवता लागेको भने ढोकाभित्र र भूत लागेको भने ढोकाबाहिर नुनको पोको […]
Posted in अनौठो संसार,स्वास्थ्य / जीवनशैली Read More »
नाकको एउटा प्वालले साढे २ मिनेटमा एकैपटक १२ वटा ट्युबमा हावा भर्ने यी व्यक्ति !
एजेन्सी। एक व्यक्तिले नाकको एक प्लालले थुप्रै टायरमा एकैपटक हावा भर्न सक्छ भन्दा पत्याउन मुस्किल होला । तर, यो सत्य हो । एक चिनियाँ नागरिकले एकैपटक १२ वटा ट्युबमा नाकको मात्रै एक प्वालले हावा भरेका छन् । यस्तो अजिव काम गरेपछि ती व्यक्तिको नाम गिनिज बुकमा समेत लेखिएको छ । चीनको नान्जियाङ ग्रान्ड क्यान्योनमा आयोजित […]
एजेन्सी, मानिस मात्रै गुफामा बास बस्दैनन् । जनावर पनि गुफा बस्ने गर्छन् । अहिले यस्तै एउटा घटना सार्वजनिक भएको छ । तर, यो घटना केही पुरानो हो । खबरअनुसार सन् १९९७ मा न्युजिल्यान्डमा एउटा भेडा एकाएक हरायो । भेडा गुफामा पसेको थियो । स्थानीय भेडा फर्ममा रहेका हजारौं भेडामध्ये अलि धुर्त र डरपोकखालको भेडा गुफा […]